Sary Avy Amin’ny Media Sosialy Mampiseho ny Loza Vokatry Ny Horohorontany Matanjaka tao Kumamoto, Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2016 6:13 GMT
Sary fanazavana: Horohorontany “shindo 7″ (ao amin'ny Ivontoerana famantarana ny toetrandro ao Japana sy fandrefesana ny horohorontany ). sary ofisialy nalaina tao amin'ny YouTube ANN News.
Namely ny faritra andrefan'i tanànan'i Kumamoto Japoney tamin'ny Alakamisy 14 Aprily ny horohorontany “Shindo 7″ ( maridrefy 6,5 ) .Olona sivy no maty raha kely indrindra , ary 33.000 nafindra toerana hiala amin'ny tranony. 1000 eo ho eo ny olona no fantatra fa naratra.
Raha ny heriny no jerena,dia izy no horohorontany lehibe indrindra nahazo an'i Japana taorian'ilay iray izay namely ny avaratra atsinanan'i Japana faritra Tohoku tamin'ny volana Martsa 2011, niteraka ny tsunami goavana izay nahafatesana olona an'arivony.
Ny “fandrefesana shindo” an'i Japana no mandrefy ny herin'ny hovitra , na ny hamafiny . Any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao, refesina arakaraky ny hery avoakany na ny maridrefy ny horohoron-tany.
Nitohy nandritra ny alina ny fiantraikan'ny hovitrovitra. Nisy ekipa mpaka sary iray, nalefa mba handrakitra an-tsary ny fahasimban'ny rindrin'ny lapa ao afovoan-tanàn'ny Kumamoto ,naka sary ny tohin'ny horohorontany ary nalefa mivantana tamin'ny fahitalavitra. Ilay lahatsary dia mitondra ny lohateny hoe “olona 23.000 nafindra toerana taorian'ny horohorontany Shindo 7 namely an'i Kumamoto.”
Tsapa betsaka tamin'ny faritra andrefan'i Japana ny horohoron-tany ary tao Mashiki , kaominina ambanivohitra atsinanan'ny tànanan'i Kumamoto no nisy ny foibeny .
Nisy fantsona etona vaky, nahatonga firehetana maro (maro ny tonkatrano Japoney no niantehitra tamin'ny etona propana mba handrahoana sakafo sy hamanana rano, tehirizina ivelan'ny tokantrano ny propana ary hidina ao anaty fantsona mahatanty tsindry).
Feno sarin'ny horohoron-tany sy ny fiantraikany ny media sosialy taorian'ny horohoron-tany.
Kaominina Mashiki , Prefektioran'ny Kumamoto: Maro ny tranobe no potika vokatry ny horohorontany Shindo 7 sy noho ny afo naterak'izany.
Araka ny tatitra , nahatonga fihetsehana hita maso sy fahapotehana trano maro ny horohorontany Shindo 7. Voalaza fa tamin'ny 10 ora alina, 14 Aprily dia maherin'ny 10 ny trano nirodana. Levon'ny afo ny sasany tamin'ireo rafi-panorenana.
Hita ho voa mafy tokoa ireo trano tranainy.
Nahazo sary avy amin'ny angidimby teo ambonin'ny ivon'ny Kumamoto izahay. Sary manokana fandrakofana eto: http://mainichi.jp/photography/
Tsy nahazaka ny herin'ny fihovitrovitry ny tany ny faritra misy ireo fonenana nentim-paharazana.
Tafahitsoka tao ambanin'ny tafo taila nihotsaka ilay olona 75 taona tompon'ity trano ao Mashiki ity saingy voavonjin'ny mpiray vodirindrina aminy ora iray taty aoriana teo ho eo. taolana roa no tapaka taminy ary nalefa tany amin'ny hopitaly izy. Araka ny nolazain'ny vadiny dia nitampikitra tao ambanin'ny latabatra kely iray izy ary afaka niaro ny lohany, ary ho sitrana vetivety izy.
An'arivony ny olona no nialoka tamin'ny toerana malalaka toy ny toeram-pilalaovana amin'ny sekoly noho ny tohin'ny horohorontany sy ny tahotra mety isian'ny firehetan-trano maro kokoa avy amin'ny fivakisan'ny fantson'ny etona .
Taorian'ny horohorontany tao Kumamoto , nafindra toerana tamin’ ireo sekoly eo an-toerana ireo mponina ary nialoka tao anaty labasy plastika.
Niaina tanatin'ny alina sarotra izahay satria nitohy ny horohorontany tao amin'ny tànanan'ny Kumamoto.
Amin'izao fotoana izao dia efa nohalalahana ny toeram-pilalaovana ao amin'ny Oniversite ao Kumamoto. Nanaiky handray ireo tra-boina ny kianja mitafon'ny sekoly noho izany na aiza na aiza misy anao, karakarao ny tenanao.
Nisy mponina sasany nandefa sarin'ny fahasimbana tao amin'ny media sosialy.
Niongana ireo fiara tao amin'ny garazy fiantsonana mamahan-tena .
Fahasimbana avy amin'ny horohorontany ao Kumamoto .
Ny fandrefesana Richter 5 #地震 #震度7 nanatresaka tanteraka ny tany ilay horohorontany. #prayforJapan pic.twitter.com/1DrVdmQuTE
Niharan'ny fahasimbana lehibe ny rindrim-bato manodidina ny hady tao amin'ny Tranomandan'i Kumamoto, dika mitovy narafitra tamin'ny vy sy vatosokay naorina tamin'ny 1960.
Tsy nahatohitra ny horohorontany ilay ” mimanda mafy tsy hay ananiham-bohitra” . Tsy nahatohitra ny tohin'ny horohorontany ny rindrin'ny lapa .
Nanondro ny olona sasany fa niseho teo akaikin'ny tobin'angovo nokleary telo ao amin'ny Prefektioran'i Saga (ao avaratra kely fotsiny), Kagoshima (ao atsimo kely), ary Ehime (tokony ho 300 kilaometatra atsinanana ao amin'ny nosy Shikoku) ilay horohorontany somary lehibe sy mahery vaika tao Kumamoto.
Tsy sasatra ny manakaiky ny maridrefy 8 ny horohoron-tany ao Kyushu. Atahorana ny hisian'ny horohorontany mahery vaika eny akaikin'ny foibe nokleary.
Ary toy ny mitranga matetika amin'ny media sosialy amin'ny fotoanan'ny krizy, misy tsaho iray farafahakeliny malaza be alohan'ny tena hamantarana ny zava-misy marina.
Tsaho ilay “lion'ny horohorontany”!
Taorian'ny horohorontany dia nisy sarin'ny ” liona iray nandositra avy ao amin'ny valam-bibin'i Kumamoto” izay nozaraina aman-taoniny tao amin'ny Twitter .
Avy ao Johannesburg (Afrika Atsimo) ireo sary raha ny fijery azy.